Ungamtsala njani uMfazi weSagittarius: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ungamtsala njani uMfazi weSagittarius: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni
Ungamtsala njani uMfazi weSagittarius: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni
Mgcine ehleka apho ukwazi khona.
Bonisa ukuba uyayixhasa indlela aphila ngayo.
Mthabathe uhambo lokuhamba.
Yiba nesisa nobubele kwinkampani yakhe.
Qhubeka nolwimi lwakhe olubukhali.
Ngenxa yobuninzi bayo bokuhamba ngokukhululekileyo, eyona nto iphambili ekufuneka uyenzile kukumgcina onwabile kwaye evuselelekile. Musa ukwenza impazamo ngobukrelekrele-amava akhe obomi athetha ukuba ngumntu ojikeleze kakuhle.
Oko kwathethi, uburharha ikwayinxalenye ebalulekileyo kubuntu bakhe. Mgcine ehleka apho ukwazi khona. Ngale nto engqondweni ke, incoko kufuneka ihambe ngokulula kodwa ibe nengqondo nayo. Ukuxoxa ngezicwangciso zokuhamba kunye namava akho angaphambili ngumzekelo omkhulu woku.
Uthando lwakhe ngobomi lithetha ukuba angancokola malunga nantoni na entle, kwezomthetho nakwezopolitiko, kwiindaba zosaziwayo kunye namaxabiso okutya. Nangona utyekelo lwendalo lokwenza iziqhulo lusenokucebisa ngenye indlela, umfazi weSagittarian uhlala efuna iinyaniso eziphezulu kunye nobulumko. Ukukwazi kwakho ukuncokola ngezihloko zefilosofi ezingakumbi kuya kuchaphazela indlela oza kukwazi ngayo ukugcina ingqondo yakhe ivuselelekile.
Usenokungafuni ukwabelana nantoni na eyeyakhe ukuba aqale nayo, kodwa ingqondo yakhe ebanzi iboleka iingcebiso, ke ukumcela ukuba asasaze ulwazi lwakho nawe malunga nomxholo othile yindlela elungileyo yokuhamba.
Rhoqo, isidingo sakhe sokuhambahamba nokuzibandakanya kumava amaninzi ebomini sidlula amandla akhe okucinga ngendlela ebonakalayo. Kulapho ungangena khona. Ngokuqinisekileyo kuya kubakho amaxesha apho kuya kufuneka umbuyise kancinci ngaphandle kokuthintela iminqweno yakhe yangaphakathi- ayisiyonto ilula nangayiphi na indlela.
Ingachazwa ukuba abafazi be-Sagittarius balondolozo oluphezulu. Ngelixa kunokubakho inyani koku, ikwayindlela entle yokubonisa ukuba uyayixhasa indlela aphila ngayo. Ukuyisusa kuye yonke imihla kwindawo ekubaleka kuyo kwindawo yokutyela eyahlukileyo okanye iklabhu yasebusuku yobugcisa iya kuhla kakuhle.
Cinga ngale ndlela: lonke ithuba elitsha kuye lithuba lokwenza into emnandi. Nokuba uhambe uyokufumana ikomityi yekofu ayisiyonto imbi kuye.
Unoko engqondweni, kuya kufuneka uvuleleke ukuzama izinto ezintsha, ukusuka kukutya okutsha, indawo ezintsha, ukonwatyiswa okutsha… kuyo yonke into entsha!
Oko akutsho ukuba akazithandi izinto ezincinci nangona. Ukuba kukho nantoni na, izijekulo ezincinci zothando lwakho ziya kuthakazelelwa kakhulu, ke vula uthumele iintyatyambo zakhe ngelixa esemsebenzini umzekelo.
Nangona izinto zakhe zihlala zibekwa ngaphezulu kuninzi, abafazi beSagittarius kufuneka baxabise izinto ezincinci, njengoko kubhekisiwe ngasentla. Into elula njengohambo lwenkampu ngumsebenzi omkhulu kuye.
Kukho imiceli mngeni ebandakanyekayo kwinkampu-ayithandayo. Ikwayinto yothando kakhulu ngenxa yokuzifihla kwayo - nguwe nawe ehlathini kungekho mntu ungomnye.
Abafazi be-Sagittarian banamandla ngobuninzi. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa balindele ukuba uqhubeke nayo. Ukutshatisa i-drive engapheliyo kunye namandla kuya kumgcina ecaleni kwakho, nokuba kunzima kangakanani oku.
Kunye noku, ukugcina ingqondo evulekileyo kubalulekile ekugcineni ubudlelwane ixesha elide. Ukuvuleleka ngokwaneleyo ukuba unike izinto ezintsha uzame kwaye ukhulule ingqondo yakho kubaluleke kakhulu.
Yenza konke okusemandleni akho ukuthatha inxaxheba kwiihambo zakhe
Kananjalo nengqondo evulekileyo, abafazi beSagittarian njengendoda enentliziyo evulekileyo nayo. Isandla nale nto kukuba bayawathiya amaxoki nokunganyaniseki.
Akufuneki ukuba uthi, ukunyaniseka nokunyaniseka malunga neemvakalelo zakho, iminqweno kunye noloyiko kunceda umfazi wakho ongumSagittarian akubone ukuba uyintoni… into elungileyo.
Ukuba awunguye uhlobo oluphumayo nolunomdla, kungcono ukuba umxelele oku ukuze nikwazi ukwahlukana ngeendlela zoxolo.
Ukusilela kokwenza oku kuya kuzisela ingqumbo yakhe, kuyenze nzima nzima ukufumana ukuthembana kwakhona. Ukuzimisela ukuphumelela intliziyo yakhe kuya kuthetha ukuba kuya kufuneka ube nengqondo ephangaleleyo kangangoko.
Mhlawumbi eyona nto ichaza umfazi wakho onguSagittarian ngumnqweno wakhe wokungakhathali wokuhamba.
Ukubonisa ukuba ungumntu ongenako ukwanelisa iimfuno zakhe zokuhamba, kodwa nomntu okwakokwakhe ukuba kufuneka aphile ubomi naye.
Indlela yokuphila engaginyisi mathe yinto ekufuneka ithintelwe ngazo zonke iindleko-ke ke unokungaqikeleleki! Ukugcina i-enigma malunga nawe yindlela eqinisekileyo yokufumana abafazi bakho be-Sagittarian ukuba bawe kunye nawe.
Ngokukodwa, ukutyhala kunye nokutsala kusebenza ngomtsalane. Ukubaphatha kamnandi kwimihla yakho kuhle, kodwa landela oku ngokugcina umgama othile. Oku kuya kumgcina enomdla kwaye anomdla kwinto oza kuyenza ngokulandelayo.
Uyakuthanda ukudlala ngothando, kodwa usenokuba neentloni ekuqaleni. Uyonwabela ngakumbi kulonwabo kunayo nayiphi na enye into, ngakumbi xa unokumfanisa nobukrelekrele bakhe kunye nomtsalane-ukubonisa ukuba ubukhali-ululwimi ngokwaneleyo ukuba uqhubeke naye.
Inxalenye yendlela yokuphila yokuhlola ukuba abafazi baseSagittarian bayayithanda xa bedibana nabantu abatsha. Bayaphumelela kolu hlobo lwendalo, ke ukuma ngaphandle kunye nokugcina ukonwaba kwakhe ngowona mceli mngeni mkhulu.
Kubalulekile ukuba wenze konke okusemandleni akho ukuba ube ngumhlobo wakhe kuqala. Ama-Sagittarians alawulwa nguJupiter, ehamba ngendlela eya kuchaza ukuba kutheni esenza uburharha, nokuba kungamaxesha angafanelekanga.
Ukutshatisa uburharha bakhe obugqithisileyo kubalulekile, njengoko ekhangela umntu oza kwenza oku. Kukucima okukhulu kuye xa indoda yakhe ikhalaza rhoqo ngeengxaki zayo.
Yintoni onokuyiphepha kunye nenenekazi lakho leSagittarius
Ukungathembani nokubawa akuhambi kakuhle kumfazi wakho weSagittarius. Logama ungamgcina onwabile, ngekhe angathembeki kuwe.
Oku ngaphandle kwento yokuba uyathanda ukudlala ngothando. Akukho nto imbi malunga noku, yinxalenye nje yesimilo sakhe.
Ukubonisa ukukhula kunye nokukhuseleka ukumvumela ukuba enze oku kuya kumzisela imbeko. Kuya kufuneka uphephe ukubonisa esidlangalaleni uthando. Usenokuba uyokuzonwabisa emva kweengcango ezivaliweyo, kodwa ukubambelela kakhulu ngalo lonke ixesha kucinyiwe.
yintoni uNovemba 22 zodiac sign
Abafazi abathandanayo abanalo kwaphela unyamezelo kwi-melancholy okanye ukungonwabi. Ukuba bafumana i-inkling encinci yokuba uza kumfumana kunzima, okanye isantya sobudlelwane sinzima kakhulu, uya kujika ajonge kwenye indawo.
Kuyafana nakumadoda ane-ego ethe kratya-ezi ntlobo zabantu ziyathandabuza kwaye azinamdla kuye, kwaye uya kuthintela nabani na obonisa ezi mpawu.
Ngale nto engqondweni, akuqhelekanga ukuba abafazi be-Sagittarian babenobudlelwane obuninzi ebomini bakhe. Isizathu soku kukuba uya kusebenza kakhulu malunga nokuhamba kude nobudlelwane angonwabanga kuko.
Ngokwemvelo yabo, abafazi be-Sagittarian bazimeleyo kakhulu. Uyasibona isizathu esincinci sokuba kutheni engafanele ukuhlawula ityala xa uphuma.
Ngcono azive ngathi ulingana nawe kunokuba uhlawule yonke into ngendlela. Ngale nto engqondweni, kuya kufuneka ubenakho ukuyamkela into yokuba womelele, kwaye akunakubanjwa nangayiphi na indlela.
Ungumoya okhululekileyo, kwaye akufuneki ubanjwe. Oku kufuneka kuhlonitshwe, kungenjalo uya kususwa sisimo sakho sengqondo aye kwenye indawo.
Akayi kufuna ukwenza naziphi na izibophelelo emva kweeveki nje ezimbalwa, kwaye engathathi ngobubele nakwisiphelo. Ngaphezulu kwayo yonke enye into, ufuna indawo kunye nexesha.
Mnike inkululeko ayinqwenelayo kwaye uya kukumema ukuba ube yinxalenye yendlela yakhe yokuphila.
Isandla nale nto yintlonipho. Kuphephe ukuba patron xa uthetha naye. Uyakuthanda ukufunda izinto ezintsha kodwa xa usenza oko, kwenze ngendlela eya kuthi ibucebe ubomi bakhe. Akanyamezeli kangako ubushushu obufutshane, ukuba krwada okanye ukuzithoba.
Ukungqala kwakhe kukuxelela konke malunga nendlela afuna ukuphathwa ngayo. Akanomdla wokudlala imidlalo okanye ukukhohlisa nabani na.
Yonke into ayilindeleyo iyafana nawe - ukumxelela ngokuchanekileyo indlela oziva ngayo yeyona ndlela ibhetele kunokuzama ukuyifihla okanye ngokunika imiqondiso.
Yintoni ekufuneka uyigcinile engqondweni malunga nomfazi weSagittarius
I-Vibrant, ezimeleyo, inenzondelelo-ngamagama nje ambalwa anokusetyenziselwa ukuchaza umntu obhinqileyo ongumqondiso weSagittarius. Ukuba kukho into enye ngaphezu kwayo yonke into ayifunayo, kukubona ubuhle behlabathi, kufanelekile nawe.
Amanenekazi eSagittarius ayaphumelela ngaphandle komceli mngeni, ngoko ke ayothusi into yokuba kuhlala kusukelwa indoda efanelekileyo- hayi enye indlela. Ayisiyonto iqhelekileyo emva koko ukufumana iindima eziguqulweyo ngelixa uzama ukuphumelela intliziyo yomfazi wakho weSagittarius.
Oko kwathethi, ukumlinda ukuba akuqaphele ayisiyonto ilumkileyo ukuhamba-kunqabile ukuba bahlale bengatshatanga ixesha elide.
Umnqweno wakhe wobomi uthetha ukuba uhlala esebenza ngengqondo 'yeglasi enesiqingatha'. Egcwele ithemba elosulelayo, akaze anikezele kubunzulu bobomi, efumana uburharha kwiimeko ezininzi apho anakho.
Ikwathetha ukuba unomdla kuzo zonke iinkcubeko kunye neenkolelo ezahlukileyo ebomini, kungoko umnqweno wakhe wokubona yonke into anayo emhlabeni.
Ukuba neziseko zobuhlobo obuqinileyo kubalulekile kuye - hayi ngendlela onokuthi uye kuye, kodwa ngokubanzi nabahlobo bakhe abajikelezayo. Kuni, oku kuthetha ukuba indlela ezinzileyo ibhetele kakhulu. Thatha ixesha lokumazi ukuba ungubani na, kuba iya kukumisela ixesha elide.
Amandla akhe angenasiphelo athetha ukuba uvuke kwangoko kwaye uyasebenza. Ukuthambekela kwakhe ekusebenzeni kakhulu kuthetha ukuba uhlala enesidingo sokulungelelaniswa, ngoko ungothusi ukumbona esenza kwaye adibanise uluhlu lwakhe oluninzi kunye nezinto eziza kwenziwa.
Ngenxa yokuba inenekazi lakho leSagittarius lilawulwa yinto yoMlilo, kufanelekile ukuthi yonke imiqondiso yale nto, inqwenela ukusebenzisa yonke into engqonge yona. Yilapho uthando lwakhe lokuhamba luvela khona. Umnqweno wakhe wokufunda ngeendlela ezahlukeneyo zobomi kuthetha ukuba ukucinga kwakhe kunqabile ukuba kube nemida. Xa ebeka injongo, phantse ihlala inamabhongo.
Oko kwathethi, kunqabile ukuba ahlale azolile, njengoko ehlala efuna amava amatsha kunye nezinto ezintsha zokumvuyisa.
Ngolwazi lokuba ukuhamba kunye namava aphambili kubukho bomfazi weSagittarius, kuya kufuneka kucace ukuba ukuba liqabane lakhe kuko okuya kumtsalela ngaphakathi. Ufuna umntu anokwabelana naye ngako konke oku, kunye nomntu onokongeza nakuyo.
Unqwenela ukubona yonke into ekufuneka ayinike ubomi, ke kufuneka ube nothando kwaye unomdla. Ukwenza oku kuya kuqinisekisa ubudlelwane obumangalisayo apho naziphi na iintsuku ezimbini kunqabile ukuba zifane.
Umfazi wakho we-Sagittarius uthanda ukulawula konke okwenzeka ngeenxa zonke kuye. Ngale ndlela, unokuntywila entloko kuwo nawaphi na amathuba amatsha eza kuye, nokuba luhambo okanye lishishini.
Kubalulekile ukuba umvumele ukuba asasaze amaphiko akhe kwaye abe yile nto afuna ukuba yiyo. Uya kufuna ukuba ube yinxalenye yamava akhe kodwa okoko ungazami ukumthintela, uya kuhlala ecaleni kwakho.
Kule meko, unyanisekile kwaye uyakhathala njengoko unokufuna. Oku kuthetha ukuba nakwixesha elide. Njengophawu loMlilo, uyamthanda kwaye unomdla kakhulu, umenza iqabane elifanelekileyo ukuba uyakwazi ukuqhubeka naye.
Ukuthandana noMfazi weSagittarius: Izinto omele ukuzazi
Ngaba abafazi beSagittarius banomona kwaye banako?
Umfazi weSagittarius Othandweni: Ngaba uyalingana?
Uphawu lweZodiac ngoJanuwari 12
Umfazi weSagittarius: Iimpawu eziphambili kwezothando, inkqubela phambili kunye nobomi
Umhlaza kunye nokuhambelana kobuhlobo beSagittarius
Leo Januwari 2021 Nyanga nganye yeHhoroscope
i-taurus eyindoda kunye ne-taurus yabasetyhini
loluphi uphawu ngoJanuwari 14
ukuhambelana komfazi kunye nomhlaza wokudibana kwendoda
do sagittarius amadoda abuye
virgo kunye nomhlaza ukuhambelana ngokwesondo
Ngo-1950 unyaka we-zodiac yamaTshayina